rastriya baanijya bank limited(rastriya baanijya bank limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
rastriya baanijya bank limited
राबा बैंकको नाफा ५८ करोडले घट्यो, कारण यस्तो छ
काठमाण्डौ । नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको यस राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको आ.व.२०७७/७८ को चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणहरु प्रकाशित भएको छ । बैंकले यस अवधिमा रु. ३ अर्ब ७९ करोड खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । गत आ.व. को सोही अवधिमा बैंकको खुद मुनाफा ४ अर्ब ३७ करोड रुपैंया रहेको थियो । यस अवधिमा बैंकले कोभिड–१९ बाट प्रभावित...
काठमाण्डौ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले कोभिड १९ बाट प्रभावित आफ्ना ग्राहकहरुलाई प्रचलित ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । हाल विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको कोभिड १९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट तथा नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न...
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा नवील बैंकले सबैभन्दा बढी खूद नाफा आर्जन गरेको छ । कोरोना कहरको अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि नवीलले आफ्नो नम्वर वानको पोजिसनलाई कायमै राखेको देखिएको छ। नवीलले यो वर्षको सुरुवातदेखि नै नाफामा सबैलाई उछिन्दै आएको छ । यो क्रमलाई १० महिनासम्मको अवधिसम्म पनि कायमै राखेको देखिएको हो । विगतमा...